News Feed Archives | Page 35 of 41 | Frontier Myanmar
ယခင်အစိုးရ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်အချို့ကိုပါ စွပ်စွဲထားသည့် ကျောက်မျက်ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံ
ကျော်ဖုန်းကျော်နှင့် ဉာဏ်လှိုင်လင်း ရေးသားသည်။ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ရတနာရောင်းချရငွေများမှ တစ်ရာခိုင်နှုန်းစီ ဖြတ်တောက်ကာ သိမ်းဆည်းထားသော ရန်ပုံငွေ ယူရို ၉၃ သန်း (ကျပ်သန်းပေါင်း တစ်သိန်းနှစ်သောင်းကျော်)နှင့် ပတ်သက်၍ အရှုပ်အထွေးများဖြစ်ပွားနေသည့်ကိစ္စကို ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဝင် အချို့က ယနေ့ ဇွန် ၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်၍ ဖွင့်ချလိုက်သည်။.
နှစ် ၂၀ အတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် ပြည်တွင်း ဆန်စားသုံးမှုစစ်တမ်း ကောက်ယူမည်
ရန်ကုန်မြို့ရှှိ ဆန်ဆိုင်တစ်ဆိုင်။ ဓာတ်ပုံ- အန်းဝမ် ရန်ကုန် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆန်စားသုံးမှုစစ်တမ်းအား နှစ် ၂၀ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကောက်ယူရန် စီစဉ်နေသည်ဟု မတ် ၂၇ ရက်နေတ် Global New Light of Myanmar သတင်းစာတွင် ရေးသားထားသည်။ စစ်တမ်းအား ရေဆင်းရှိ.
အစိုးရအဖွဲ့တွင် ဦးမြင့်ဆွေ ပါဝင်လာမှုကြောင့် စိုးရိမ်စရာမလိုဟု အင်န်အယ်လ်ဒီက ပြောကြား
မတ် ၁၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အဆောက်အဦးသစ် ဖွင့်လှစ်ပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် ဦးမြင့်ဆွေ။ ဓာတ်ပုံ- အေအက်ဖ်ပီ အင်န်အယ်လ်ဒီက ဖွဲ့စည်းသည့် အစိုးရသစ်ကို အင်န်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသာ ဦးဆောင်သွားမည် စိုးသန်းလင်း ရေးသားသည်။ နေပြည်တော်၊ မတ် ၂၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းသည့် အစိုးရအဖွဲ့တွင် အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ သစ္စာခံတပည့်ရင်း ဖြစ်ရုံသာမက.